Philips BHD002 Hair Dryer | Buy online | SHOP.COM.MM
Philips BHD002 Hair Dryer
အသံလေးကညက်တော့ နားငြီးသက်သာပြီး ဆံပင်လည်းအခြောက်မြန်လို့ အရမ်းကြိုက်သွားပါပြီ။ Read more Hide
အပူပေးအားညီမျှလို့ကြိုက်တယ်။ dryer ခေါင်းကကျဉ်းလို့ လေကန်ထွက်အားကောင်းပြီး ဆံပင်အခြောက်ခံလို့ပိုကောင်းတယ်။ အသံငြိမ်လို့ နားညီးသက်သာသေးတယ်။ Philips ကို star အပြည့်လိုက်ပြီးနော် Read more Hide
ကိုင်တွယ်ရအဆင်ပြေပြီး ဆံသားကို အခြောက်မြန်စေလို့ အရမ်းသဘောကျပါတယ်။ Read more Hide
Philips' product, BHD002 Hair Dryer is made fit to every user. It is very easy to use and can dry your hair inaquick. With hook you can hung store it up easily.
Specifications of BHD002 Hair Dryer